Nampirisihan’ny rainy ihany… : maty nohanin’ny alika ilay zanany | NewsMada
Nofatorana, nokendaina: karana vavy hita faty tao anaty “baignoire” ...mars 26, 2019
Prison de haute sécurité: vers la réouverture de « Nosy Lava » ...mars 26, 2019
Prison de haute sécurité: vers la réouverture de « Nosy Lava »
Nofatorana, nokendaina: karana vavy hita faty tao anaty “baignoire”
Conjoncture: l’insécurité plane sur les législatives
Mahajanga: olona telo lasan’ny ranomasina teo amin’ny village touristique
Nampirisihan’ny rainy ihany… : maty nohanin’ny alika ilay zanany
Par Taratra sur 17/04/2018
Kaikitra enina teo amin’ny hatony ary efatra teo amin’ny tendany, niampy dian-drangotra teo amin’ny tarehiny sy ny lamosiny no nitarika ny fahafatesan’ny zazakely 2 taona sy tapany noho ny kaikitry ny alika avo razana teny Ambatomaro, ny asabotsy teo. Ny rain’ilay zazakely ihany no nampiditra ilay alikabe tao an-trano…
Nampihoronkoditra! Maty tsy tra-drano ilay zazakely tsy manan-tsiny vokatry ny hadalan’ny rainy niteraka azy. Raim-pianakaviana 30 taona ity nahavanon-doza nanao fihetsika mamoafady ity. Voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava, sakelika faharoa teny Ambatomaro, ny sabotsy 14 avrily 2018 lasa teo ity raim-pianakaviana nahavanon-doza ity noho izy namono nahafaty ny zanany. Tonga nametraka fitoriana tao amin’ny polisy ny renin’ilay zazakely nilaza fa novonoim-badiny ny zanany eny Ambatomaro. Raha ny zava-nitranga tamin’io sabotsy io, mamomamo ilay raim-pianakaviana raha niditra tao amin’ny trano fonenany sady fiasany eny Ambatomaro satria mpiambina ilay tanàna ny asany ao. Nangataka vola 10 000 Ar tamim-badiny izy tamin’io fotoana io, saingy tsy nanome ilay vola notadiaviny ny vadiny ka raikitra ny fifamaliana teo amin’izy mivady. Norahonany fa havoaka ny alikabe ao an-tanàna rehefa mafy loha tsy mety hanome vola azy ramatoa vadiny.
Tsy nanaiky lembenana anefa ramato tamin’io fotoana io ary nilaza fa tsy matahotra ilay alika.
Niatsampy tamin’ilay zaza ity alikabe…
Tamin’izay indrindra, novahan’ilay raim-pianakaviana tampoka ny alika ary novohany koa ny varavarana miditra ao an-trano. Niditra tao an-tranon’izy telo mianaka ilay alika, saingy nitsoaka teo amin’ny varavarankely ilay ramatoa vadiny raha vao nahatazana ity alika nihazakazaka niditra tao an-trano. Tavela irery teo ilay zazakely 2 taona sy tapany. Niatsampy tamin’ilay zazakely ity alikabe sady nandramatra nihinana azy. Ilay ramatoa any ivelan’ny trano naheno ilay alikabe niherongerona mihinana ity zanany sy feom-badiny niteny hoe : “Mipetraka”! “Mipetraka”! Nibaiko no sady niezaka nanala ilay alika nihinana ny zanany. Tsy avotra intsony ny ain’ilay zazakely noho ny ratra nahazo azy na nezahina nentina tany amin’ny hopitaly aza. Tamin’ny fizahana nataon’ny polisy no nahitana ireo kaikitra marobe teo amin’ny hatony sy ny tendan’ilay zazakely. Nosamborin’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahatelo izy ka nentina avy hatrany eny amin’ny polisin’ny BC anaovana famotorana. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy.
Samy tezitra tamin’ity raim-pianakaviana ity avokoa izay rehetra nahita izao fihetsika mamohehatra nataony tamin’ny vady aman-janany izao.
Une réponse à "Nampirisihan’ny rainy ihany… : maty nohanin’ny alika ilay zanany"
Monpays 17/04/2018 à 15:51
Mais pourquoi la maman n’a pas protégé son enfant en sachant que le chien arrive et le mari est un méchant?
Nofatorana, nokendaina: karana vavy hita faty tao anaty “baignoire” 26/03/2019
Prison de haute sécurité: vers la réouverture de « Nosy Lava » 26/03/2019
Hisorohana ny kitrotro: zaza 4 tapitrisa atao vaksiny 26/03/2019
Mpiasam-panjakana iray: “Ny mahatolotolotra ihany… “ 26/03/2019
Accès Banque: masoivoho vaovao eto Toamasina 26/03/2019
La politique en bref: puce électronique
Dans le cosmos: CCEcsca– De belles retrouvailles avec Solika